Homo Loves: A Machine
ဟား...ဟား စိတ်ထဲအလိုလိုကို ရယ်ချင်နေမိအောင် ပျော်ရွှင်ရပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ အသက် ၁၈နှစ်ပြည့်ပြီ၊ လူကြီးဖြစ်ပြီ အရွယ်ရောက်ပြီ မဟုတ်လား။ တစ်ယောက်တည်းတော့ နေချင်ပါဘူးနော်။ မာမီတို့နှင့်နေရတာပဲပျော်တယ်။ မနေ့ညက အိမ်မှာ မွေးနေ့ပွဲလေးလုပ်ခဲ့တာ လက်ဆောင်အများကြီးရတယ်လေ။ ဟိုကောင်စုတ်လေး မိုးဆွေက 'ဆရာ အတ္တကျော်ရဲ့ သားငယ်တို့ နားလည်ဖို့' စာအုပ်ကိုလက်ဆောင်ပေးတယ်။ မြန်မာပြည်က မှာပြီးလက်ဆောင်ပေးတာဆိုတော့ တန်ဖိုးထားရမှာပေါ့။ ကျောင်းက Teacher Jerry က မွေးနေ့အနမ်းဆိုပြီး ပါးကို နမ်းသွားသေးရဲ့။
ဒီနေ့ ကျောင်းလည်းပိတ်တယ်။ ပြီးတော့ မွေးနေ့အတွက် မုန့်ဖိုးရထားတာဆိုတော့ မြို့ထဲလျှောက်ပတ်ရဦးမယ့် အတွေးနဲ့ ဟိုသည် လျှောက် တနေကုန်သွားရင်း မုန့်စားပြီးပြန်လာတာ အိမ်နားရောက်ခါနီးမှ Sky bar ရဲ့ခမ်းနားမှုကိုမြင်ရတော့ ဟီး....ဘားကိုသွားပြီး နည်းနည်းကစ်လို့ရတဲ့အရွယ်ရောက်ပြီဆိုတာ သတိရတယ်။ ဘားထဲဝင်သွားရင်း ကောင်တာနား ကထိုင်ခုံမှာ ထိုင် ဘီယာတစ်ခွက် အော်ဒါမှာလိုက်တယ်။တစ်ယောက်တည်းထိုင်ရင်း ဟိုသည်ကြည့်နေဖြစ်တော့ အသက်နည်းနည်းကြီးပြီး လူကြီးလူကောင်းပုံပေါက်တဲ့ လူတစ်ယောက် စကားစပြော မိတ်ဆက်တယ်။ ဒီလူကြီးက အတော်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ လူကြီးပဲဗျ။ စပ်မိစပ်ရာပြေကြရင်း နောက်ဆုံးတော့ သူ့ဝါသနာ ကိုယ့်ဝါသနာအကြောင်းတွေဘက် စကားရောက်သွားရော။ သူက စက်မှုပိုင်းဆိုင်ရာ တွေ လုပ်ရတာ ဖန်တီးရတာကြိုက်တယ်တဲ့။ ဦးစွာပထမ သာမန် robot တွေကို သူဘယ်လိုလုပ်တယ်ဆိုတာ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာ၊ နောက်တော့ သူတို့တွေ ဘယ်လိုလမ်းလျှောက်ပြီး လက်တံတွေ ဘယ်လိုလှုပ်ရှားကြတယ်ဆိုတာလည်း စိတ်လှုပ်ရှားဖို့ကောင်းတာ ကြောင့် စိတ်လိုလက်ရ ကျွန်တော်မေးကြည့်စူးစမ်းကြည့်ရတယ်။
ရုတ်တရက် သူကမေးတယ် 'အိမ်ကိုလိုက်ခဲ့ပြီး robot တွေကို ကြည့်မလား?'တဲ့။ ကျွန်တော် 'သတိထား'ဆိုတဲ့အတွေးမျိုးဝင်မိပါ သေးတယ်။ ဘီယာလေးခွက်လောက် ကစ်ထားတာရော အဲဒီလူကြီးကျွေးထားတဲ့အမြည်းတွေကောင်းမှုကြောင့်ပါ ရီဝေေ၀ဖြစ်စပြု လာပါတယ်။ ဇာတ်သိမ်းတော့ သူနဲ့အတူလိုက်သွားဖို့ သဘောတူလိုက်ပါရော။
ကျွန်တော်တို့ သူ့အိမ်ကြီးကိုရောက်သွားတော့ အတော့်ကို ကျယ်ဝန်းကြီးမားမှန်းသိရတယ် အတွင်းမှာ။ ဧည့်ခန်းမှာ ထိုင်နေတော့ ဘီယာနောက်တစ်ခွက်နဲ့ ထပ်ဧည့်ခံပါသေးတယ်။ သူ့ရဲ့ အလုပ်ခန်းဆီခေါ်သွားပြီး နှစ်များစွာအတွင်း သူဖန်တီးပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ အံ့ချီးဖွယ် robot တွေကိုပြပါတယ်။ အဲဒီအရာတွေက တကယ့်ကို အံ့သြစရာပါပဲ။ စကားအဆက်အစပ်မရှိ ကျွန်တော့်ကိုမေးပြန်ပါရော 'sex' ကို ကြိုက်လားတဲ့။ ကျွန်တော် တုန့်နှေးနှေးနဲ့ ပြန်ဖြေမိပါရဲ့။ ကြိုက်တယ်.... ကျွန်တော်တို့ သူ့အိမ်ကြီးကိုရောက်သွားတော့ အတော့်ကို ကျယ်ဝန်းကြီးမားမှန်းသိရတယ် အတွင်းမှာ။ ဧည့်ခန်းမှာ ထိုင်နေတော့ ဘီယာနောက်တစ်ခွက်နဲ့ ထပ်ဧည့်ခံပါသေးတယ်။ သူ့ရဲ့ အလုပ် ခန်းဆီခေါ်သွားပြီး နှစ်များစွာအတွင်း သူဖန်တီးပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ အံ့ချီးဖွယ် တွေကိုပြပါတယ်။ အဲဒီအရာတွေက တကယ့်ကို အံ့သြစရာပါပဲ။ စကားအဆက်အစပ်မရှိ ကျွန်တော့်ကိုမေးပြန်ပါရော ကိုကြိုက်လားတဲ့။ ကျွန်တော် တုန့်နှေးနှေးနဲ့ ပြန်ဖြေမိပါရဲ့။
'ဟား ဟား....ငါနဲ့မဟုတ်ပါဘူးကွာ၊ ငါက မင်းထက်အသက်အများကြီးရနေပါပြီ မင်းနဲ့ပတ်သက်ဖို့ဆိုရင်'
လွတ်မြောက်သွားသလိုမျိုးခံစားရပါတယ်။ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ လိင်ကိစ္စကို တစ်ယောက်ယောက်နှင့် ပတ်သက်တာမျိုးမရှိသေးတော့ sex အကြောင်း သူ့ကိုဘာပြောရမှန်းမသိဘူးလေ။
'မင်းစက်တစ်ခုပေါ် တစ်ခါလောက် စီးကြည့်ပါလား?
စက်တစ်ခုတဲ့? ဘာစက်လဲ? ပြီးတော့ စီးကြည့်? ဘာအမျိုးအစားစက်ပါလိမ့်?
'A Sex Machine'
ကျွန်တော့်မှာ အံ့သြမှင်တက်ဖြစ်မိသွားခဲ့ပါတယ်။ အရင်က ဒီလိုအကြောင်းအရာမျိုး မကြားဖူးဘူးလေ။
ကျွန်တော် သိချင်စိတ် စူးစမ်းချင်စိတ်များဖြင့် သူ့စကားကို နာခံစွာလိုက်သွားခဲ့ပါတယ် သူ့နောက်ပါးကနေ။
မီးရောင်ခပ်မှိန်မှိန် လင်းနေတဲ့အခန်းလေးထဲဝင်သွားလိုက်တာ စိတ်ကြည်နူးဖွယ် ဂီတသံစဉ်လေးကို ခပ်တိုးတိုးဖွင့်ထားတာကို ကြားနေရ ပါရဲ့။ အခန်းအလယ်မှာတော့ မွေ့ယာပါ စားပွဲတစ်ခု။အနှိပ်ခုံနှင့် ခပ်ဆင်ဆင်တူသော စားပွဲခုံ၊ အိပ်ယာခင်းအဖြူ ဆွတ်ဆွတ် ပေါ်မှာ ခေါင်းအုံးတစ်လုံး တင်လျက်။
'ကျွန်တော် ဒီအကြောင်းမသိဘူးလေ ဘာလဲဆိုတာ'
'ဘာမှမဟုတ်ဘူး၊ မင်းကြိုက်မှာ သေချာပါတယ်။ အဲဒီကရတဲ့ဖီလင်က အရမ်းကောင်းတာကွ။ အခု မင်းအ၀တ်တွေ မြန်မြန်ချွတ်လိုက်'
ကျွန်တော်ဘီယာသောက်တာများသွားပြီထင်ရဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အ၀တ်မပါဘဲ တွေ့လိုက်ရခြင်းလေ။ စားပွဲခုံဆီပြန်လျှောက်သွားလိုက် တယ် သူ့အမိန့်အတိုင်း...
'အဲဒီ Underwear ကိုရောချွတ်လိုက်'
ဘောင်းဘီကို အသာဆွဲချွတ်လိုက်ရော အဲဒါနဲ့။ မီးရောင်မလင်းတလင်းမှာ ဒီလူကြီးရဲ့ရှေ့မှာ အ၀တ်မပါရပ်နေရတာ စိတ်အနှောင့် အယှက်တော့ဖြစ်မိသလို ခံစားရပါတယ်။ မိသားစုဆရာဝန်နှင့် အထက်တန်းကျောင်း ဘောလုံးကစားတုန်းက ရေချိုးစဉ်အချိန်တွေကလွဲ လို့ ကျွန်တော့်ကိုယ်ခန္ဓာမှာ အ၀တ်မပါတာကို တစ်ယောက်မှ မမြင်ဖူးပါဘူး။ မမာခင်တောင် ၆လက်မနီးပါးရှိနေတဲ့ ကျွန်တော့် ညီဘွား များ မာတောင်လာတာကို ဒီလူမြင်ရင် ဘာများပြောဦးမလည်း သိချင်ပါရဲ့။
စားပွဲအစွန်းမှာထိုင် မွေ့ယာပေါ်မှာလှဲ၊ ပြီးတော့ ခေါင်းအုံးပေါ်မှာ မှီအိပ်လိုက်လို့ပြောတာကြောင့် ကျွန်တော်လည်း မရဲတရဲလှဲချလိုက် တယ်။ ဘာကြောင့်လည်းမသိ အတင်းအကြပ်ပြလုပ်ခိုင်းနေသလိုပဲလို့ ကျွန်တော်ခံစားနေရပါပကော။ သေချာတာကတော့ ဘီယာ သောက်တာများသွားပြီ။ နောက်တော့ သူစားပွဲစွန်းက လက်တံနှစ်ခုထောင်တက်လာအောင် လုပ်လိုက်ပြီး ကျွန်တော့်ခြေထောက် နှစ်ဖက်ကို တင်လိုက်ပါတယ်။ Velcro strap တစ်ခုစီကို ခြေချင်းဝတ်တွေမှာ တပ်လိုက်တာကြောင့် ကျွန်တော် လို့အော်လိုက်ပေမဲ့ သူလက်စသပ်တပ်ဆင်လိုက်ရော။ သူ့အပြောကတော့ စားပွဲပေါ်က ပြုတ်မကျရအောင် စိတ်ချရဖို့လုပ်သတဲ့။ ဒါ့အပြင်စားပွဲစွန်း တစ် ဖက်ကို စွဲကိုင်ပြီး ထဖို့ပြင်တဲ့ ကျွန်တော့်လက်ကောက်ဝတ်တွေကိုရော Velcro strap တွေတပ်ကာ စားပွဲကခွာမရအောင်လုပ်တယ်။ ဘာလုပ်မလို့လည်းမသိ.....ကျွန်တော်....ကျွန်တော်ကြောက်စပြုလာပြီဗျ။
အတန်ကြာ ကျွန်တော့်တစ်ကိုယ်လုံး စူးစမ်းနေပြီးနောက် ခြေရင်းဘက်ကိုပြန်လာကာ စက်လက်တံနှစ်ဖက်ကို ပိုမြှင့်လိုက်တာကြောင့် ကျွန်တော့်ခြေထောက်တွေ လေထဲမြောက်ပြီး ကားနေရော။
'ဘာ? မင်းကိုလုပ်မယ်? ငါမင်းကိုလုပ်မှာ မဟုတ်ဘူး...အိုကေ?'
ကျွန်တော် သူ့ထိန်းချုပ်မှုအောက် လုံးဝရောက်သွားရပါပြီ။ သူ့ထောင်ချောက်မှာ ပိတ်မိခဲ့တာပေါ့။ လုံးဝကို မလှုပ်နိုင်တော့ပါ။ နံရံပေါ်က ခလုပ်တစ်ခုကို လက်ဖြင့်တောက်လိုက်တော့ အလင်းရောင်တန်းလေးတစ်ခု မျက်နှာကျက်ကနေ ထိုးကျလာတယ် ကျွန်တော့် -ီး၊ ရွှေဥ နှင့် ခရေပေါက်ပေါ်ကို။ ကျွန်တော့်အတွေးထဲ မျက်စိထဲမှာ ပစ္စည်း ကိရိယာတွေအားလုံး အရောင်တောက်ပနေကြသလိုပါပဲ။ အဲဒီနောက် ကျွန်တော့်ခြေထောက်နှစ်ဖက်ကြား စက်လက်တံတစ်ခု ယူဆောင်တပ်ဆင်လိုက်တယ်။ ခေါင်းကို စောင်းပြီး ငဲ့နိုင်သမျှငဲ့ကာ သူဘာလုပ် သလည်း ကြည့်ရတာပေါ့။ သူစားပွဲအခြေမှာ စက်လက်တံတစ်ခုကို တွဲလျက်တပ်ဆင်နေတာ။ အဲဒါရဲ့ အဆုံးမှာ dildo လေးတစ်ခု ပါနေ တာပါ။ စက်လက်တံတွေ ချိန်ညှိရင်း အချိန်အနည်းငယ်အကြာမှာ ကျွန်တော့်ခရေ၀မှာ တွန်းထိုးမှုတစ်ခု ခံစားရပါတယ်။
'Look! ငါအခု အလုပ်များနေတယ်၊ မင်း ငါ့ကိုနှောင့်ယှက်ရင်တော့ မင်းပါးစပ်ကို တိပ်နှင့်ပိတ်ထားရမှာဘဲ '
အိုး...ကျွန်တော်ဘာလုပ်မိခဲ့ပါသလဲ? အခုတော့ သူလုပ်သမျှ မငြင်းရဲစရာဖြစ်နေပါပေါ့။ သူ ခလုပ်တွေ အားလုံးကိုဖွင့်လိုက်တယ်။ မျက်နှာကျက်က အလင်းရောင်လေးက ခရေ၀ကို ပိုမိုထွန်းလင်းစေပါရော။ ခရေ၀ကိုထိနေတဲ့အရာက အခန်းတွင်းဝင်ချင်လို့ တံခါး ခေါက်နေသလိုမျိုး tap...tap...tap နဲ့။ အရှိန်နှုန်းကိုမြှင့်လိုက်တော့ အဆက်မပြတ်ခေါက်တော့တာ.... အား....အဲဒီလိုလုပ်တာ ကျွန်တော့်ခရေ၀ကို ထူးခြားသော ခံစားမှုတစ်ခု ပေးနေသလိုပါပဲ။
ဘိုးတော် ကျွန်တော့်နံဘေးကို လျှောက်လာကာ စားပွဲဘေးဘက်မှာ ခေါက်သိမ်းထားသော စက်လက်တံတစ်ခုကို မျက်နှာကျက်ထိဆွဲ ထောင်လိုက်ကာ လက်တံအစွန်းကို ပေါင်ခြံက ညီဘွားနားကို နှိမ့်ချလိုက်တယ်။ အဲဒီလက်တံရဲ့အစွန်းမှာ cylinder တစ်ခုပါပြီး သူအဲဒီ့ ဟာရဲ့ အဖုံးကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ နုညံ့မဲ့ရာဘာသားတွေနှင့် ပုံသဏ္ဌာန်တစ်ခုကို ကျွန်တော်မြင်ရတာ။နည်းနည်း ကြောက်စိတ်ဝင် နေတာကြောင့် ပျော့နေတဲ့ ကျွန်တော့်ငပဲပေါ် baby oil တွေလောင်းချပြီး ပွတ်သပ်ပေးတယ်။ နောက်တစ်ခါ ခဏနေက cylinder ထဲ ကျွန်တော့်ငပဲကို မြှုပ်အောင်ဖိပြီးသွင်းလိုက်တယ်။ ငပဲတစ်ခုလုံး ထောင်ချောက်တစ်ခုထဲ ပိတ်မိသွားသလိုပါ။ အားလုံးပြီးတဲ့အခါမှာတော့ လက်တံတွေကို ချိန်ညှိမှုတွေလုပ်ပြန်တယ်။
Aircon ရဲ့ အေးစိမ့်မှုကြောင့်ရော ဒီလူကြီးလုပ်ဆောင်နေတာတွေကြောင့် ကျောထဲက စိမ့်တက်လာရပါပြီ။ ဟော အခုလည်းကြည့် သားရေအိတ်ငယ်လေးတစ်ခုယူလာပြီး ကျွန်တော့်ရွှေဥတွေကို ထည့်လိုက်ပြန်တယ်။ အိတ်ငယ်လေးရဲ့ တစ်ဖက်က စတီးကွင်းလေးကို ကြိုးငယ်တစ်ခုဖြင့် စက်လက်တံမှာ ချိတ်လိုက်တာပေါ့။ မျက်နှာကျက်ကနေ ကိုင်းပြီးကျနေတဲ့ စက်လက်တံကို လှုပ်ရှားစေလိုက်တာ ကျွန်တော့်ကွမ်းသီးခေါင်းဟာ cylinder ရဲ့အတွင်းပိုင်းထဲ တိုးဝင်ပျောက်ကွယ်သွားရော။ စက်လက်တံက အပေါ်ဆွဲမလိုက်တိုင်း ကျွန်တော့်ငပဲက ဆွဲဆန့်ခံရသလို ရွှေဥတွေဟာလည်း ထို့အတူ။
စက်လက်တံရဲ့လှုပ်ရှားမှုအရှိန်မြှင့်ခြင်း အဖိအကြွတွေနှင့်အတူ ကျွန်တော့်ငပဲဟာလည်း တဖြည်းဖြည်းထွားလာကာ cylinder နှင့် တောင်ခပ်ကြပ်ကြပ်ဖြစ်သွားပါတော့တယ်။ တစ်ချက်ဆောင့်လိုက်တိုင်း ကျွန်တော့်ညီဘွားဟာ cylinder ရဲ့အတွင်းသားရာဘာထဲမြှုပ်မြှုပ် သွားရသလို ပြန်ကြွလိုက်တိုင်း ညီဘွားရဲ့ ကွမ်းသီးခေါင်းထိမြင်ရတာ။ Oh my god, ဒီဖီးလ်က အရမ်းကို ကောင်းလှချီလား....ကျွန်တော် မသိခဲ့ဘူး ဒီလိုပစ္စည်းက ဖီလင် ကောင်းအောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာ။ မိန်းမတစ်ယောက် အပေါ်ကတက်ခွပြီး စိတ်ကြိုက်ဆောင့်နေတဲ့ လှုပ်ရှားမှုနှုန်းအတိုင်းပါလား....အိုး....အိုး..။
ဘိုးတော် မျက်နှာကျက်က စက်လက်တံရဲ့ အရှိန်နှုန်းကို လျော့ချလိုက်ကာ ကားထားတဲ့ပေါင်နှစ်ချောင်းကြားက dildo တပ်ထားတဲ့ စက်လက်တံကို လှုပ်ရှားစေပါတယ်။ တံခါးခေါက်သလို အစဦးပိုင်းကလှုပ်ရှားပေမဲ့ အခုတဖြည်းဖြည်း ကျွန်တော့်ခရေပေါက်ထဲတိုး တိုးဝင်လာရော။ ကျွန်တော့်ဗိုက်ထဲ ခုလုခုလု ဖြစ်မိပါတယ်။ လှုပ်ရှားမှုအရှိန်ကို ခပ်နှေးနှေးလုပ်ထားတော့ က ငြင်သာစွာဝင်တယ်... ထွက်တယ်....၀င်တယ်...ထွက်တယ်...။ ဒီစက်လက်တံက ကျွန်တော့်ခရေ၀ကို ခပ်ဖြေးဖြေး -ိုးနေခဲ့တာ..... ohhh.. .ohh..
စက်လက်တံတွေက ကင်းခြေများလက်တံတွေလို ကိုယ်စီအလုပ်ရှုပ်နေတုန်း သူကျွန်တော့်နံဘေးကို လာရပ်ကာ baby oil တွေကို ရင်အုပ်တွေဗိုက်သားတွေပေါ်လောင်းချပေးပြီး ကျွန်တော့်ကြွက်သားတွေကို ပွတ်သပ်နှိပ်နယ်ပေးပါတော့တယ်။ ကျွန်တော့်ရင်အုပ်ပိုင်းဆီ သူ့လက်တွေရောက်ရောက်လာတိုင်း နို့သီးခေါင်းလေးကို အသာညှစ်တယ်။ သူ့ရဲ့လက်က နို့သီးခေါင်းကို ညှပ်နဲ့ဆွဲသလိုလုပ်နေတုန်း မျက်နှာကျက်က စက်လက်တံက ကျွန်တော့်ညီဘွားကို နုညံ့တဲ့ရာဘာသားပါ cylinder အသုံးပြုဆော့ကစားတယ်။ အိုး.....စားပွဲစွန်းက စက်လက်တံကတော့ dildo အသုံးပြု အထုတ်အသွင်းပြုတာ..။ Dildo ကရိုးရိုးမ၀င် ကွေးကွေးနေပြီး ခရေတွင်းရောက်မှာ ဆန့်ဆန့်သွားကာ ကျွန်တော့် prostate gland ကိုထိထိမိမိတို့တယ်။ ကျွန်တော် ဘာမှလည်း မပြောနိုင် ရုန်းကုန်မှုလည်းမပြု ကင်းခြေများလက်တံတွေရဲ့ လှုပ်ရှားမှုကို ခေါင်းအုံးပေါ် အသာမှေးစက်ရင်း ကြည့်ရုံသာတတ်နိုင်တော့တယ်။
Dildo ရဲ့အသွင်းအထုတ်ပြုတဲ့အချိန်တွေတိုင်း ခရေတွင်းပိုင်းက အထိအခိုက်မခံတဲ့နေရာလေးကို အချက်ကျကျ အပြိုင်လာလာထောက် တယ်။ မျက်နှာကျက်က လက်တံကတော့ ခပ်ရွရွလေးလှုပ်ရှားလိုက်မြန်လာလိုက်နဲ့ Ohhh....ကျွန်တော် ဘယ်သူ့ကိုမှ ဒီအကြောင်း မပြောဘူး၊ သူတို့ကျွန်တော်ပြောတာကို ယုံကြမယ်မထင်။
ကျွန်တော့်ဗိုက်သားတွေ၊ ရင်အုပ်တွေ၊ နို့သီးခေါင်းလေးတွေ သူပွတ်သပ်နှိပ်နယ်ပေးချိန်မှာ သတိထားမိတာက သူ့ခြေထောက်မှာ ခြေညှပ်ဖိနပ်ပါးပါးလေးကိုပဲ စီးထားတာ။ ဒါကြောင့်စက်လက်တံတွေထိန်းချုပ်ရာမှာ လျင်လျင်မြန်မြန်ရွေ့လျားနိုင်ခြင်းပေါ့။ ကျွန်တော့် နို့သီးခေါင်းလေးတွေ သူ့လက်ညှိုးလက်မလေးတွေနှင့် ပွတ်သပ်ပေးချိန် အသံထွက်ညည်းမိတယ်။
သူအခန်းထဲက တစ်နေရာကို သွားလိုက်ပြီး ပြန်လာတော့ အ၀တ်ညှပ်ကလစ်လေးနှစ်ခုယူလာတယ်။ ပထမတစ်ခုကို ကျွန်တော့်ညာဘက် နို့သီးခေါင်းလေးမှာ ညှပ်တာ 'အား' နာတယ်ဗျ။ ပြီးတော့ ဘယ်ဘက်နို့သီးခေါင်းကို ညှပ်ပြန်ရော။ နာကျင်မှုကြောင့် ဖီလင်လျော့သွားပြီ ထင်ပေမယ့် ခဏအကြာမှာတော့ မယုံနိုင်ဖွယ် မာတောင်ပြီး တဆတ်ဆတ်ထိခတ်နေရော ဖီလင်ကို။
နာကျင်မှုကြောင့် မှေးမှိတ်သွားမိတဲ့ မျက်လုံးတွေကို ပြန်ဖွင့်လိုက်ချိန်မှာ ကျွန်တော့်ခြေထောက်တွေဟာ လေထဲကားယားဖြစ်နေတာ ကြက်ရိုးနှစ်ခုကို မိုးပေါ်ထောင်ထားသလိုကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်။ စက်လက်တံတွေဟာ ကျွန်တော့်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာ အသီးသီး လှုပ်ရှား နေကြတာ မယုံကြည်နိုင်ဖွယ်ပါ။ ဘယ်တုန်းကမှ မမျှော်လင့်ခဲ့တဲ့ ဖီလင်တွေကို တစ်ပြိုင်တည်း ခံစားမိနေရခြင်းလေ။ ဒါသိပ်ကို Hot တဲ့ ဖီလင်ပဲ။ မမျှော်လင့်ခဲ့တဲ့မွေးနေ့လက်ဆောင်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ ရုတ်တရက်ဆိုသလို ဖြစ်တော့မယ့် ခံစားမှုမျိုး ဖြစ်တည်လာ ရပါပြီ။ ကျွန်တော်သိတယ် လောင်ချာထဲက ဖြူပျစ်ပျစ်ကျည်ဆံတွေ ပန်းထုတ်ဖို့ အသင့်ဖြစ်နေပြီဆိုတာ။ ဒီလူကြီးရဲ့စက်လက်တံအနက် မျက်နှာ ကျက်က လက်တံက ခပ်သွက်သွက်လေးဖြစ်လာသလိုပဲ။ Oh....ရွှေဥတွေကိုရော ခပ်ဖွဖွဆွဲနေတာ။ သူကတော့ နို့သီးခေါင်းက အ၀တ် ညှပ်ကလေးတွေကို ဖိလိုက်ဖွလိုက်လုပ်ရင်း ကစားနေပါရော။
ရုတ်တရက်ပါပဲ အဲဒီလူကြီးက မျက်နှာကျက်က စက်လက်တံကို အရှိန်လျှော့ချပစ်တယ်။
ဒါပေမဲ့...ဒါပေမဲ့ စောင့်ပါဦးဗျာ ကျွန်တော် ပြီးချင်နေပြီ၊ ပြီးခါနီးပြီဗျ။ သူ့ကိုပြောချင်ခဲ့တယ် ကျေးဇူးပြုပြီး စက်ကိုဖွင့်ပေးဖို့။ ဒါကိုတကယ် တမ်းကျွန်တော့်နှုတ်က ပြောမထွက်ခဲ့ပါဘူး။ စက်လက်တံက အချိန်ကြာ မြန်မြန်လှုပ်ရှားနေရာကနေ အနှေးဆုံးဖြစ်သွားတယ်။ ဘာကြောင့်မှန်းမသိ ဒီလူကြီးက ကျွန်တော်ဘယ်အချိန်မှာပြီးဆုံးဖို့အသင့်ဖြစ်ပြီဆိုတာ သိနေခဲ့ရတာပါလိမ့်။ ပြီးတော့ စက်ကိုရပ်ပစ် တယ်လေ။
နောက်ဆုံးစားပွဲစွန်းက dildo ပါတဲ့စက်လက်တံကိုဖွင့်လိုက်ပြီ... ခပ်မြန်မြန်.....Oh my god, Ohhhhhhh, Oh my god! ကျွန်တော့်ကို အဲဒီအရာကြီးက -ိုးနေတာပဲ။ လုပ်ပြန်ပြီ မျက်နှာ ကျက်က စက်လက်တံကိုရော အရှိန်မြှင့်ပစ်လိုက်တယ်။ ကျွန်တော့်စိတ်တွေအားလုံး ဟိုးအမြင့်ဆီရောက်ကာ လွတ်ထွက်သွားသလား မသိ။ လူကိုရူးအောင်လုပ်နေတာပါပဲ။ တစ်ကိုယ်လုံး ရှိတဲ့ကြွက်သားတွေ လှုပ်ခါကုန် ကာ လှိုင်းလုံးတွေ တစ်လုံးပြီးတစ်လုံးဆင့်တက်လာ သလို ရွှေပြွန်ကနေ သုတ်ရည်တွေ အားလုံးပန်းထုတ်ပစ်မိပါတယ်။ လေထဲကို ၀ဲပျံသွားပြီးနောက် ရင်အုပ်တွေ၊ ဗိုက်သားတွေပေါ် အများ အပြားကျကုန်ရော။
ကျွန်တော်သိတယ် အစွမ်းကုန်အားလုံးပန်းထုတ်ပြီး အမြင့်ဆုံးခံစားချက်ရောက်ခဲ့ပြီဆိုတာ။ ကျွန်တော် အတော်ပင်ပန်းနေပြီ အိပ်ချင်နေပြီ ဆိုတာကိုပဲ တောင့်တနေမိပါပြီ။ အမည်မသိလူကြီးဟာ စက်လက်တံတွေရဲ့ အရှိန်နှုန်းကိုလျော့ချပစ်ပါတယ်။ ပြီါ်တော့ ကျွန်တော့်ခရေ၀ ကို -ိုးနေတဲ့ စက်လက်တံကိုပိတ်ပစ်တာ dildo က အတွင်းထဲသွင်းလျက်။ သူမွှေးပွတဘက်တစ်ထည်ယူလာကာ ကျွန်တော့်ရင်အုပ်၊ ဗိုက်သားတွေကို ပွတ်သပ်သုတ်ပြီး သန့်ရှင်းပေးတယ်။ 'Good boy, မင်းတော်တော်များများသိမ်းထားတာပဲ' ကျွန်တော်သူပြောတာ တွေကို ပြန်မတုန့်ပြန်ပဲ မျက်စိမှိတ်ပြီး ငြိမ်နေမိပါရော။ ကျွန်တော်အိမ်ပြန်ချင်ပြီ အခုကို အိမ်ပြန်ချင်ပြီဗျာ။ စကားဆက်မပြောဘဲ ခဏ ငြိမ်နေကာ တံခါးမကြီးရှိရာကို သူလှမ်းသွားပါတယ်။
ကျွန်တော်ပြောတာတွေကို မကြားဘူး။ သူအခန်းထဲက ထွက်သွားတယ်။မျက်နှာကျက်ကကိုင်းကျလာတဲ့ စက်လက်တံဟာတော့ ကျွန်တော့်ငပဲကို ပွတ်သပ်နေတာ အထက်အောက်ငြင်ငြင်သာသာရွှေ့လျားရင်း။ ထိတွေ့မှုအာရုံအရကော လှုပ်ရှားပွတ်သပ်မှုကြောင့်ပါ ကွမ်းသီးခေါင်း နည်းနည်းလေးမာလာတာနဲ့ cylinder ထဲတိုးဝင်ပျောက်ကွယ်သွားရပါတယ်။ တစ်ချက်တစ်ချက် လှုပ်ရှားတိုင်းအတွင်း ထဲ ပြန်ပြန်ဝင်သွားပါရဲ့။ 'အာ....အ...ရှီး....အ ..ရပ်ပါတော့....အာ' ခဏနေတော့ လှုပ်ရှားမှုမှာ အထာကျသွားရတဲ့ ကျွန်တော်မိနစ် အနည်း ငယ်လောက် အိပ်မောကျသွားပါတယ်။
ဖိနပ်သံ တလျှပ်လျှပ်နဲ့ ဟိုလူကြီးပြန်ဝင်လာတော့ ကျွန်တော် စောဒကတက်ကြည့်တယ်။ မရပါဘူး....သူက အပြုံးမပျက် သဘော တောင်ကျနေသေး။
'No, မဟုတ်ပါဘူးကွ၊ မင်း -ီးဆက်ပြီးမာနေအောင်လို့ပါ'
'ကြည့်လေ.....ခင်ဗျားကြည့်လေ မာတောင်နေတာ အမြှောက်ဖြစ်နေပြီ'
'ကောင်းပြီ.....နောက်တစ်ကြိမ် လှုပ်ရှားဖို့မင်းအဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား ?'
ကျွန်တော် မခံချင်စိတ် မသက်မသာဖြစ်စိတ်တွေဖြစ်လာရင်း သူ့ကိုဒေါသထွက်လာပါတယ်။ လူကိုကစားစရာအရုပ်များ မှတ်နေလား မသိဘူး။ ကျွန်တော် ဒေါသထွက်ပြီးအော်လေ သူက သဘောကျလေဖြစ်နေရဲ့။
ဒီတစ်ခါ သူ စက်လက်တံနှစ်ခုစလုံးကိုဖွင့်တယ်။ cylinder ပါတဲ့လက်တံက ခပ်သွက်သွက်လှုပ်ရှားသလို စားပွဲစွန်းက လက်တံကလည်း ခပ်မြန်မြန် ကျွန်တော့်ခရေ၀ကို -ိုးပြန်ပြီ။ ကျွန်တော့်ငပဲဟာ တဖန်ပြန်မာတောင်လာကာ ဖီလင်က ကောင်းလာပြန်ရော။ 'အား...အ....အ ' ရွှေဥတွေ ကိုလည်း မထိတထိဆွဲတယ်။ Ohhhhhh.....Ahhhhhh....Ah..
'ငါတို့ မင်းမပြန်သွားခင် အရည်တွေအားလုံး မြှောင်းဖောက်ထုတ်ကြတာပေါ့'
Ohhhhhhhhh...ကျွန်တော် စကားပြန်မပြောနိုင်ဘူး။ အသံထွက်ညည်းမိရင်း မျက်ဖြူစိုက်ရတယ်။ သူကတော့ ဒါကိုသဘောကျစွာ ရယ်သပေါ့။
'ငါ့ဘော်ဒါ ကောင်လေးတွေအားလုံး သူတို့မပြန်ခင် အကြိမ်ကြိမ် များများပန်းထုတ်ပေးသွားကြတာ'
'ဟုတ်တယ် လာနေကျ ကောင်လေးတွေရနေပြီ ငါက'
'မှန်တယ်၊ ငါ့မှာလာနေကျ ကောင်လေးတွေ ၁၂ယောက်ရှိတယ်။ မင်းက ၁၃ယောက်မြောက်'
'မင်းဒီက ထွက်သွားရင် ဒီနေရာကို ဘယ်တော့မှ ပြန်မလာဘူးလို့ ဆုံးဖြတ်မယ်၊ ကြောက်သွားမယ်။ နောက် ၂ပတ်လောက်ကြာပြီး လပြည့်တဲ့အခါ မင်းငါ့ဆီဖုန်းဆက်ပြီး ဘယ်အချိန်မှာ ငါနဲ့လာတွေ့နိုင်မလဲမေးမယ်။ ဒါတွေအားလုံး ကောင်လေးတွေလည်း လုပ်နေကျ'
ဘိုးတော်....ဒီလူကြီး တခစ်ခစ် သဘောကျစွာ သူ့ဘာသာသူ ရယ်မောနေရင်း ကျွန်တော့်နို့သီးခေါင်းလေးတွေကို ပွတ်သပ်ဖျစ်ညှစ်ပြန် တယ်။ Shit! ဟုတ်တယ် သူပြောတာမှန်မယ်။ ကျွန်တော်လည်း ပြန်လာချင်လိမ့်မယ်။ အာ.....စက်လက်တံတွေက ပိုသွက်လာသိုပါပဲ။ သူ...သူ အရှိန်မြှင့်လိုက်ပါလား။
ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းမိုးဆွေရဲ့ မွေးနေ့အပြီးနောက်တစ်ပတ်အကြာမှာဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ ကျွန်တော့်ကိုယ်တွေ့လေးရယ်ပါ။ မိုးဆွေရော တစ်ခုခု ကစ်ဖို့ ဒီ Sky Bar ကိုလာခဲ့သေးလား ကျွန်တော်သိချင်မိရဲ့။
နောက်ပြီး ကျွန်တော် အမှန်တကယ် နားလည်သဘောပေါက်ရတာက ဒီအဘိုးကြီးဟာ ၀ါသနာတစ်ခုထက် ပိုနေတယ်ဆိုတာလေ....။
Alex Aung (6 September 2010)
Posted by Min Lay at 3:20 PM